जेठी छोरीको निधनको पिडा भुल्न नसक्दै फेरी श्रीमान र अर्की छोरीको सडक दुर्घटनामा परि निधन ! घटना सुनेपछि आमा बेहोस ! – ईमेची डटकम
जेठी छोरीको निधनको पिडा भुल्न नसक्दै फेरी श्रीमान र अर्की छोरीको सडक दुर्घटनामा परि निधन ! घटना सुनेपछि आमा बेहोस !
Posted byइमेची संवाददाता December 11, 2019 Leaveacomment on जेठी छोरीको निधनको पिडा भुल्न नसक्दै फेरी श्रीमान र अर्की छोरीको सडक दुर्घटनामा परि निधन ! घटना सुनेपछि आमा बेहोस !
विराटनगर- सडक दुर्घटनामा पेसाले डाक्टर बाबु र नर्स छोरीको निधन भएको छ। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा मोटरसाइकलमा सवार बाबु छोरीलाई यात्रुबहाक बसले ठक्कर दिएको हो। ठक्कर लगत्तै उपचारका लागि विराट मेडिकल कलेजमा लगिएको थियो। उपचारका क्रममा नै उनीहरु दुवैजनाको निधन भएको नेमुवा ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज तुलामणी आचार्यले बताए।
तनहुँका पत्रकार पौडेल अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
जब झुप्रोकी बुढीलाई अंगालो हाल्दै राजा बिरेन्द्रले भने ‘आमा म तिम्रो छोरो जस्तै हुँ’